महासचिवमा पुन र शर्माको दाबी, सहमति नभए चुनाव ! | Axiskhabar
महासचिवमा पुन र शर्माको दाबी, सहमति नभए चुनाव !
पुस २३, २०७८, १:०४ AM
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रको ८ औँ महाधिवेशनले छनोट गरेको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्षमा निर्विरोध चयन गरी निरन्तरता दिए पनि अन्य पदाधिकारीको टुंगो लगाउन सकेन । माओवादीमा अध्यक्षका अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, २ उपमहासचिव, ३ सचिव र कोषाध्यक्ष रहने विधानको व्यवस्था छ ।
महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय समितिको पुस १९ गते सोमबारको पहिलो बैठकले अध्यक्षबारे मात्रै निर्णय गरेर अन्य पदाधिकारी चयन लगायतका कामका लागि २५ गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तय भएको छ । उक्त बैठकमा केन्द्रीय समितिमा मनोनयन, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो चयनका एजेन्डा रहेको अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठक २५ गतेसम्म सार्नुको कारण भने अध्यक्ष दाहालले चीनमा स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका महासचिवका दाबेदार वर्षमान पुनको आग्रह रहेको सोमबारको बैठकमै बताएका थिए । पुन र नेतृ ओनसरी घर्ती चीनमा रहेको र उनीहरूले पदाधिकारी चयनमा आफूहरू पनि सहभागी हुन चाहेको तथा चाँडै फर्किन लागेकाले बैठक सार्न आग्रह गरेको दाहालले केन्द्रीय समितिमा बताएका थिए ।
पुनले महासचिवमा दाबी गरेको र पदाधिकारी चयनमा सहभागी जनाउने इच्छा जाहेर गरेपछि केन्द्रीय समिति बैठक नै सारेर अध्यक्ष दाहालले आकांक्षीहरूबीच छलफल गराएर सहमति गराउन खोजेका नेताहरूले बताएका छन् । ‘अध्यक्षले अहिले नै कसलाई महासचिव बनाउने भन्ने कुरा राख्नुभएको छैन । दाबी गरिरहनुभएका नेताहरूमध्ये एकजना चीनमा हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि छलफल र परामर्श होला । त्यसपछि उहाँहरूलाई सँगै राखेर पनि छलफल गर्ने । एकले अर्कालाई महासचिवमा प्रस्ताव गर्ने स्थिति आयो भने पार्टीमा नयाँ एकता कायम हुन्छ भन्ने अध्यक्षको विश्वास छ,’ दाहाल निकट एक नेताले भने । महासचिवका दाबेदार पुन र शर्मा भने आफ्नो नाममा सहमति भए ठीक नभए चुनाव लड्न तयार रहेको उनीहरू निकट नेताहरूले बताएका छन् । पुन यसअघि नै सचिव भइसकेको र उनीभन्दा तल्लो पदमा रहेर शर्माले काम गरेकाले स्वाभाविक रूपमा महासचिवमा उनको दाबी रहेको उनीनिकट नेताहरूले बताउने गरेका छन् । संगठन विभागको प्रमुख भइसकेको र पार्टी कार्यदिशालाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि शर्मा नै महासचिव बन्नुपर्ने दाबी उनी निकट नेताहरूले गर्दै आएका छन् ।
Previous articleराष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन : एमालेलाई सिट जोगाउनै धौ-धौ
Next articleनेपाल प्रहरीका २६ एसएसपीको सरुवा